Safiirkii Soomaaliya ee London oo xil loo dhiibay - BBC Somali
Cabdiraxmaan Koronto Tifaftiraha Howlaha BBC Somali,
9 Luulyo 2014
Image caption Cabdullaahi Maxamed Cali, agaasimaha nabadsugidda.
Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), ayaa loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Nabadsugidda Qaranka. Waxay ka dambaysay markii xilkaas laga qaaday agaasimihii hore. Waxaa kaloo la badalay taliyihii Booliiska iyo madaxdii amniga
Tallaabo ay dowladda federaalka Soomaaliya isku dayayso in ay wax kaga qabato amniga ayaa lagu magacaabay wasiirka cusub ee amniga qaranka Soomaaliya oo loo dhiibay Khaliif Axmed Ereg oo ah madixii hore ee muqaabaraadka gobolka Banaadir.
Waxaa kaloo xilkii laga qaaday taliyihii booliiska Cabdixakiim Daahir Saacid iyo Bashiir Maxamed Jaamac, Agaasimihii hay'adda nabadsugidda. Taliyaha Booliiska ayaa loo magacaabay Maxamed Sheekh Ismaaciil.
Magacaabiddan iyo shaqo ka qaadidda, ayaa ku soo beegantay maalin kadib weerar ay al-shabaab sheegatay oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen.
Xilka wasiirka amniga, waxaa uu bannaanaa ilaa bishii May, markaas oo kadib weerar lagu qaaday baarlamaanka Soomaaliya, xilli baarlamaanku leeyahay fadhigiisa caadiga ahaa, uu xilkiisii lumiyay wasiirkii amniga qaranka Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Ilo xog ogaal ah, ayaa sheegaya in weerarkan ugu dambeeyay ay gaysteen afar ka tirsan al-Shabab. Nin ka mid ah kuwa weerarka qaaday ayaa la sheegay uu muddo ka shaqeynayay xafiiska ku yaalla gudaha madaxtooyada, uuna ahaa baabuurkiisa kan ku qarxay gudaha, ayna ku yimaadeen ugu yaraan sadex qof oo aad u hubaysan oo ka tirsan al-Shabaab.
Waxay arrintan muujinaysaa in ay jiraan daldaloolo dhinaca amniga ah iyo dabacsanaan horseeday in ay suuragasho in halbowlihii dowladda weerar lagu qaado markii labaad. Markii hore waxay ahayd bishii February ee sanadkan oo in saacado ah uu dagaal ka dhex socday xarunta madxtooyada villa Soomaaliya.
Maalmihii ugu dambeeyay ammaanka magaalada ayaa la adkeeyay oo ciidamo ay tubnaayeen waddooyinka muhiimka ah, hadana ma suuragalin in lagu hortago weerarkii shalay dhacay, iyadoo al-Shabaab ay horay ugu hanjabtay in ay bisha Ramadan dardargalin doonto howlgaladeeda.
Waxaa hadaba su'aashu tahay isbadala lagu sameeyay madaxda hay'adaha amniga ma dhici kartaa in ay horseedaan in lagu owdo daldaloolada muuqda ee keenay in ay dhacaan weeraro lagu qaado goobaha muhiimka ah.